Mashruuca Gebze Darıca Metro waxaa loo wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliMashruuca mitirka Gebze Darıca waxaa loo wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha
Mashruuca mitirka Gebze Darıca waxaa loo wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha
08 / 08 / 2019 41 Kocaeli, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
mashruuca gebze darica metro ee lagu wareejiyay wasaarada gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha
Duqa Kocaeli Assoc. Dr. Tahir Büyükakın wuxuu warbixin siiyay suxufiyiinta ku saabsan Mashruuca metro Gebze-Darıca. Duqa Magaalada Büyükakın wuxuu cadeeyay in Mashruuca metro, oo qiimahiisu yahay ku dhawaad ​​5 Billion TL, lagu wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha wuxuuna hoosta ka xariiqay in kharashka ku baxa mashruuca la siin doono muwaadiniinta. Bayaan lagu sheegay dhismaha Mashruuca mitirka, Gudoomiyaha Xisbiga AK Party Mehmet Ellibeş, Duqa Magaalada Gebze Zinnur Büyükgöz, Duqa Magaalada Darica Muzaffer Bıyık, Xoghayaha Magaalada Balamir Gundogdu, maamulka gobolka iyo borotokoolka degmada ayaa sidoo kale goob joog ka ahaa.
WAAJIBAADO CUSUB OO FURAN
Duqa Magaalada Mashruuca Gebze-Darica Assoc. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli aad ayuu ulaxiriirsan yahay bayaanka la helay. Isagoo ogaanaya in Mashruuca mitirka loo wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Büyükakın wuxuu yidhi, kapsaml overall Qiimaha guud ee mashruuca waa 5 bilyan ginni. Tani waxay u dhigantaa miisaaniyada maalgashiga sanadlaha ah ee degmadeena 5. Wareejintaan, waxaa loo soo saari doonaa mashaariic loogu talagalay muwaadiniintayada ku nool Kocaeli. Maalgashiyo cusub ayaa la furi doonaa ”.
UZ WAA IN AY KA HESHI KARINAYO MACLUUMAADKA RAILKA ”
Duqa magaalada Büyükakın wuxuu hoosta ka xariiqay inay sii wadi doonaan mashruucooda si kor loogu qaado shabakada gaadiidka ee Kocaeli si ay uga dhigto mid sii shaqeyn doonta waqtiga soo socda. Qeybta gaadiidka dadweynaha guud ahaan gadiidka Kocaeli waa 16. Marka boqolkiiba 16 ee safarada oo dhan waxaa sameeya gaadiidka dadweynaha. Waxaan rabnaa inaan labalaabno boqolkiiba. Qaybta nidaamka tareenka waxay ku dhowdahay 7. Waxaan hiigsaneynaa inaan sare u qaadno sicirkaan oo ah boqolleyda 14. Haddii aan taas ku guuleysanno, muwaadiniinteenu waxay awoodi doonaan inay u safraan Kocaeli mustaqbal farxad leh
GAADIIDKA GEBZE WAA SAMEEYA
Duqa magaalada Büyükakın ayaa bayaankan soo socda ku sheegay bayaankiisa ku saabsan dhismaha mashruuca metro: uz Waxaan rabnaa inaan si dhaqso leh u dhameystirno saldhigga barxadda si loo fududeeyo jawiga. Waxaan dhammeyn doonaa qaybtani illaa bisha Janaayo waxaanuna nasiin doonaa Gebze Town Square. Waxay nagu qaadan doontaa illaa dhammaadka 2020 si loo galo tuubooyinka. Waxaa laga yaabaa in sanadka 2 uu dhibaato ku noqon doono gobolka. Laakiin marka mashruuca mitirka la dhammeeyo, waxaan si nabad ah ugu noolaan doonnaa gobolkaan muddo sannado ah 50 waxaanan ku noolaan doonnaa nolol raaxo leh gaadiid. Dadkeenu waxay si fududaan u heli doonaan Gebze iyo Darıca ..
LA SOCO MADAXWEYNAHA
Wuxuu kaloo xusay hanaanka la xiriira wareejinta Büyükakın Metro. Duqa Magaalada Büyükakın wuxuu cadeeyay inay booqdeen Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan oo ay wehliyaan Gudoomiyaha Gobolka AK Party Mehmet Ellibeş waxayna yiraahdeen: ik Waxaan u gaarsiinay in Mashruuca Mitir uu la mid yahay miisaaniyada maalgashiga sanadlaha ah ee 5 ee Dowlada Hoose. Wuxuu sheegay in qarashkani saameyn ku yeelan doono maalgashiga loo sameyn doono muwaadiniinta ku nool Kocaeli. Waxay naga heleen saxan xilligan oo waxay yiraahdeen tilmaamo ayey siin doonaan Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha. Isla markiiba ayaan la xiriirnay. Xoghayahayaga Guud ayaa sameeyay codsiyadeenii shalay. Waxaan rajeyneynaa intaas wixii ka dambeeya, Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha inay sameyn doonaan dhulkeena tareenka. Miisaaniyadda waxaan u wareegeynaa adeegyo kale. Waxaan ku mahadinayaa qofkasta oo gacan ka gaystay.
Gebze Darıca Subway waxaa loo wareejiyay Wasaaradda, laakiin ...
Khadka Tareenka ee Gebze Darıca wuxuu noqon doonaa Wasaarad
Mashaariicda Gaadiidka Masaakiinta ee Adana Wajiga 2aad ee Mashruuca EIA Warbixinta kama dambaysta ah…
Munaasabad ballaaran ayaa lagu qabtay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha
Mashruuca Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ee 100 Qorshe-hawleedka Maalmeed-maalin
Bishii Abriil ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha
Mashruuca Tareenka Gebze-Darica
Xarunta Tareenka Gebze-Darica
Mashruuca Metro ee Kocaeli
U fiirso shidaalka aad u isticmaasho mustaqbal nadiif ah!
Erciyes, Qiimaha Dunida